Galician Gastronomy - Cunnooyinka ugu caansan ee dhulkan | Safarka Absolut
Cudurka caloosha ee Galician
La Cudurka caloosha ee Galician waa tan ugu kala duwan. Suxuunta leh maaddooyinka aasaasiga ah iyo kuwa fudud, laakiin taasi waxay keenaysaa isku-dhafka badda iyo berriga. Marka laga soo tago soo-ururinta aagga, qaniinyo kasta waxay noqotaa iid dhab ah, samaynta cuntooyinka had iyo jeer waxay sii ahaanayaan jiil ilaa jiil
Cunnada, iyo waliba cabitaankuba waa shay had iyo jeer la joogo markaan ka hadlayno Cudurka 'Galician gastronomy'. Dhaqanka mid kasta oo ka mid ah gobolladiisa waxaa lagu soo koobi karaa suxuunta soo socota ee aan sheegayno. In kasta oo ay jiraan kuwo kale oo aad dhadhamin karto oo keliya haddii aad booqato dhulkan Meigas ka buuxo.
1 Biktadii, polbo à feira, saxankii ugu horreeyay ee Galician gastronomy
2 Maraq Galiis
3 Baay Galician
4 Lacon leh dusha sare dabocase
5 Keegga Santiago
6 Churrasco, hilib aasaasi ah oo ku dhex jira caloosha Galicia
7 Cuntada badda
8 Basbaaska Padron
9 Freixós ama Filloas
10 Khamriga cabitaanka ama kareemka kareemka?
Biktadii, polbo à feira, saxankii ugu horreeyay ee Galician gastronomy
Waa mid ka mid ah cuntooyinka caadiga ah, dhab ahaantii waxaa jira qaybo badan oo ka mid ah Galicia halkaas oo ay ku leeyihiin xaflad u gaar ah cuntadan macaan. Sidoo kale waa run in octopus waxaa loo diyaarin karaa siyaabo kala duwan, laakiin dhaqanka Galiya ayaa doorta à feira. Magaca ayaa ka yimid carwada caadiga ah ee lagu qabtay O Carballiño, gobolka Ourense. Si loo quudiyo kuwa u yimid iyada, waxaa jiray diyaarintii qooska oo inyar yarna wuxuu ku faafay dhulka oo dhan.
Wax soo jiitay dareenka dhammaan xiisaha, ilaa maanta. Aasaasku waa in la kariyo aboorka, u jarjar qaybo yaryar ama xaleefyo, ku dar milix, paprika iyo saliid wanaagsan. Mararka qaarkood sidoo kale waxaa loogu adeegi karaa 'cachelos', taas oo ah, ku kari baradho isla biyo sida octopus. Waad u kala goyn kartaa gabal ama xaleef khafiif ah oo kaligaa u adeeg ama
Mid ka mid ah suxuunta ugu weyn bilaha qabow. Ku Maraq Galiis Waxaa lagu sameeyaa salka dufanka ama dufanka, kaas oo lagu daro hilibka sida garabka ama hilib doofaar iyo feeraha. Ma iloobi karo chorizo, digirta cad, baradhada iyo dabcan, khudaarta. Xaaladdan oo kale inta badan la codsado waa cagaarka cagaaran, laakiin sidoo kale waxay noqon karaan dabocase ama kaabash. In kasta oo xaalada dambe, maraqku dhadhamin doono macaan iyo taabashada milixda waa in la hagaajiyaa. Dhammaan maaddooyinka waxaa lagu daraa dheri aad u weyn waxaana lagu buuxiyaa biyo lagu karsado. Dabcan, natiijadu way ka badan tahay wax lagu farxo!
Sida aperitif, waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan. Sidoo kale waxaa laga heli karaa carwooyinka ama suuqyada ama meelaha wax lagu dubo iyo dukaamada waaweyn. Galician empanada waxay qiraysaa waxyaabo badanSidaa darteed, in kasta oo kalluunka tuna uu ka mid yahay kuwa aasaasiga ah, waxa kale oo jira hilibka ama kalluunka kalluunka oo ka mid ah kuwa ugu caansan. Laakiin ma iloobi karno inay qirato waxyaabo ay ka mid yihiin scallops, conger eel, mussels, octopus iyo waxaas oo dhan oo ka mid ah maraqa ay ku jiraan basasha iyo paprika taasoo u horseedi doonta buuxinta cajiinka u horseedi doona empanada lafteeda.
Lacon leh dusha sare dabocase
Mar labaad, mid kale oo ka mid ah suxuunta caadiga ah ee caloosha Galicia. Sida magaceedu sheegayo, hal dhinac waxaa jira hilibka kaas oo ah garabka doofaarka, kaas oo laga helo addimmadiisa hore. Hilib leh taabasho cusbo leh oo lagu kariyey khudaar aan ahayn cid kale oo aan ahayn cagaarka cagaaran. Mararka qaarkood waxaad sidoo kale ku dari kartaa xoogaa baradhada jikada ah. Laakiin sida ay doonto ha noqotee, waa mid ka mid ah kuwa macaan ee sidoo kale ku habboon maalmaha ugu qabow ee xilliga qaboobaha.
Inta udhaxeysa inta badan cuntooyinka waaweyn iyo aperitif, waa marki macmacaan. Sababtoo ah waxaa jira dhowr, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn waa Tarta de Santiago. Waad aqoonsan doontaa maxaa yeelay waxay ku daboolan tahay sonkorta dhareerka ah waxaana ku sawiran Iskutallaabta Santiago. Waxay leedahay asal aan la aqoon laakiin dabcan, waxaan ognahay in sanado badan, laga soo gudbay jiilba jiil. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaan ka heleynaa in yicibku saldhig u yahay, sidoo kale sonkor, ukumo iyo badiyaa ma qaadaan bur.
Churrasco, hilib aasaasi ah oo ku dhex jira caloosha Galicia
Dabaaldegyo badan, waa mala awaal in marka hore uu jiro empanada ka dibna… The churrasco! Sababta oo ah waxaa badanaa la sameeyaa marka cimiladu wanaagsan tahay ay timaado, meelaha la cuno iyo kulammada saaxiibbadaa. Laakiin waa run in hilib wanaagsan laga heli karo wakhti kasta maqaayadaha. Ma yihiin doofaarka doofaarka ama hilibka lo'da hilibka la doortay, iyo sidoo kale sausages-ka Creole. Hilibka waa in la kariyaa ka dibna lagu sameeyaa wax lagu dubo. Maaddaama ay dabku bixin doono taabashadaas ugu dambeysa. Waa run inay sidoo kale wehelin karaan suugada loogu talo galay hilibka la dubay ee leh dhir udgoon. Frieska faransiiska iyo saladhku waa suxuunta dhinaceeda miiska.
Xitaa haddii aad ka badan tahay hilibka iyo churrasco, waa inaadan oran maya mid wanaagsan cuntada badda ee Galicia. Sababtoo ah waxay ku saabsan tahay badeecadaha maxalliga ah, cusub oo leh dhadhan dhan. Waxaad awoodi doontaa inaad dhadhamiso saxan wanaagsan oo cunnada badda ah iyo dhexdiisa, noocyada kala duwan ee cuntada badda ee u dhadhamin doonta sida Gloria. Cunnooyinka ugu caansan ee aan ka heli doonno waa crayfish iyo prawn, iyadoon la waayin barxadaha macaan iyo sidoo kale carsaanyo ama xuub caaro, iyo kuwo kale. Ku scallops albariño ama iskudhafka ayaa xusid mudan.
Haddii aad la socoto 'churrasco' waxaad dooneysaa xoogaa basbaas, inay ka yimaadeen Padrón. Sababta 'Sababtoo ah qaniinyo la'aan iyo dibedda, ma ahan'. Marka waxaa jira tacabur haddii aad calalinayso basbaas macaan ama mid basbaas leh. Cunnadan macaan waxay kaliya u baahan tahay in lagu shiilo saliid fara badan ka dibna ku shub xaddi badan oo milix cusbo leh.
Freixós ama Filloas
Waa run inay jiraan farqi u dhexeeya labadoodaba sidoo kale waxay kuxirantahay aagga. Sababtaas awgeed, qaar waxaa lagu diyaariyaa dhiigga doofaarka, halka kuwa kale la siiyo taabashada ugu macaan xitaa iyadoo ay ku jiraan buufin anise iyo sal caano. Noqo sida ay doonto ha noqotee, waa mid ka mid ah macmacaanka ugu macaan, taas Badanaa waxaa lagu qaataa xafladaha. Inkasta oo sanadka intiisa kale ay sii wadayaan inay ahaadaan kuwo dhadhan fiican leh.
Khamriga cabitaanka ama kareemka kareemka?
Dhammaan cuntooyinkan iyo macmacaannada ka dib, taas oo noo horseedaysa inaan ka wada hadalno iid weyn, ma jiraan wax la mid ah xabbad faan ah 'in cuntada la yareeyo' Wax aasaasi ah oo lagu sameeyo dheefshiidka. Waxaad ka heli kartaa boomaatada geedaha ama kareemka pomace, xoogaa jilicsan. Laakiin waa run in makhaayada liisanka Waa mid kale oo ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee ku dhex jira caloosha Galicia, maxaa yeelay had iyo jeer waa wehel wanaagsan. Mise waad ku dhiiran kartaa a gubtay iyo waxa ku soo arooray caloosha caloosha Galicia?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cudurka caloosha ee Galician
Maxaa lagu arkaa Cuzco